I-Offshore Banking kunye neNkampani ukuYila, iTrasti, iziCwangciso zoKhuseleko lweeAseti
Ukuseka iiNkampani ezingaselunxwemeni, ii-LLC, iiTrasti, kunye neeakhawunti zeBhanki.
· Amagqwetha kubasebenzi · Ukususela ngo-1906
I-100's yezigidi zeedola zikhuselwe
Ezona ndawo ziselunxwemeni
Iakhawunti ye-Offshore: Njani kwaye kutheni
Ukukhuselwa kweeasethi zeBulletproof
Kutheni ukhetha I-OshoreCompany.com?
Umnikezeli omkhulu kunxweme lonke
Amagqwetha angaphakathi kwabasebenzi
Kulula ukuqonda iividiyo
Iinkampani ezikhawulezayo ezikude nonxweme kunye neeakhawunti
Ingqibelelo, ukunyaniseka, ukuthembeka
Uninzi lwamaxabiso okhuphiswano kwihlabathi liphela
I-24 / 7-ungumntu ophilayo
Unxibelelwano lwasimahla lwenkonzo yaselunxwemeni
Iqela leenkonzo zabathengi abasisigxina
Ukusungula amaCorporated Offshore,
Ii-LLCs, iiTrasti kunye neAkhawunti zeBhanki.
Eyona mithetho inamandla yabucala kunye nolawulo lwebhanki engaselunxwemeni ivumela ubumfihlo bezemali kunye nokukhusela iiasethi kuqhawulo mtshato, kubabolekisi, kumgwebo nakwezomthetho.
Ukuseka inkampani elunxwemeni kunye / okanye nokufudusela isakhiwo sakho sesebe kwindawo yolawulo lwaphesheya kunokuba linyathelo elibalulekileyo ekukhuseleni iiasethi zakho kwezomthetho, ukongeza, unokukwazi ukuthatha ithuba lekhefu lehlabathi kunye nokukhulisa utyalomali lwakho phesheya. Le webhusayithi isekwe kwiminyaka yophando kwaye yenzelwe ukuba ibe sisifundo esinokukukhokela amanyathelo ngamanqanaba ekusetyenzeni nasekusebenziseni “inkampani elunxwemeni.” Uya kufumana iinzuzo ezininzi zokwakha umbutho wamanye amazwe kunye nokuqhuba ishishini lakho. Usebenzisa iakhawunti yebhanki engaphesheya endaweni, okanye unxulumana neakhawunti yasekhaya. I-Nevis, iziqithi zeCayman, iPanama, BVI kunye neHong Kong, umzekelo, zonke zilawulwa ngendlela efanelekileyo. Ke, sinokukukhokelela ekusekeni i-Corporate okanye i-LLC oyithandayo. Emva koko, singakunceda ukuseka i-akhawunti yebhanki yeshishini lakho kwaye usete iofisi ekude nonxweme.
Umthetho we-Nevis LLC unikezela ngeempawu ezizodwa nezisebenzayo zokukhusela iiasethi zokukhusela iiakhawunti zebhanki ezingaphandle.
Fowunela uNxibelelwano oluSimahla
Ngenisa amaXwebhu akho
Inkampani kunye neAkhawunti yeBhanki ivuliwe
Izibonelelo zeRhafu yaselwandle
Ukucacisa, ukwenza ishishini elunxwemeni akukho malunga nokubaleka kwirhafu okanye ukugcina imali kurhulumente. Endaweni yoko, imalunga nokuhlengahlengiswa kwemicimbi yakho ngendlela yokusebenzisa amathuba emithetho yasekhaya neyehlabathi. Le mithetho ifumaneka kuye nabani na okhathaleleyo ukuyisebenzisa ukuze axhamle. Ke ngoko, singakubonisa ngokugqibeleleyo iindlela ezisemthethweni nezisesikweni zokuseta ishishini lakho kwilizwe liphela ukuze uqonde izibonelelo ezifikelela kude kukhuseleko lweeasethi ukonga iindleko.
Abantu e-US, e-UK, e-Australia nakwamanye amazwe, ubukhulu becala, bahlawuliswa irhafu emhlabeni jikelele ingeniso. Kwelinye icala, kusenokwenzeka ukuba uyazi ukuba iApple, uGoogle kunye nezinye ziye zatyhoboza amatyala abo erhafu besebenzisa ubuchwephesha bezomthetho ngokupheleleyo ngokusebenzisa izakhiwo zaphesheya. Ukongeza, inkampani ye-inshurensi yokuthimba engenye ngenye indlela abathengi bethu bazibulele ngokusemthethweni iintlawulo zabo zerhafu phantsi kwe-IRC 953 (d) kunye ne-831 (b). Ngokuhambelana, kukho iindlela onokuthi ukwazi ukwenza nazo oku, ngoncedo lwethu kunye nokukhokelwa kweengcali ezifanelekileyo ezinelayisensi.
Asinakugxininisa inqaku lokugqibela ngokwaneleyo. Izibonelelo zerhafu ye-Offshore yindawo ebuthathaka kakhulu yomthetho. Ke, ngaphambi kokuba usebenzise ubuchule bamanye amazwe ngerhafu, qiniseka ukuba awuthethi nje nayo nayiphi na i-CPA. Thetha nomgcini zincwadi kunye / okanye igqwetha lerhafu eligxile ekuncedeni abemi kunye nabahlali ngengeniso yangaphandle. Unamathuba amaninzi okuphumelela uphicotho-zincwadi ngemibala ephaphazelayo. Kwaye uya kulala ngcono nasebusuku.
Uyilo lweNkampani ekwi-Intanethi
Elinye icebo eliphumelele kakhulu kukusebenzisa inkampani engaselunxwemeni ekusebenzeni kwishishini lakho elikwi-Intanethi. Ikwayindlela esetyenziswa nguApple noGoogle. Ukuba ishishini lakho lisekwe kwi-Intanethi kwaye uyibandakanya ngokufanelekileyo inkampani yakho yamazwe aphesheya, ngenxa yoko, inokuba nesibonelelo esihle kakhulu serhafu. Oku kunokuchaphazela iintlawulo zerhafu, ezifanayo kwi-IRA, umzekelo. Kubaluleke kakhulu ukuba nengcebiso yerhafu yeCPA enolwazi enokukukhokela ekusebenziseni esi sicwangciso. Ukusetyenziswa kwezi zixhobo ukugcina imali kwiirhafu kunokuxhomekeka kwilizwe lakho ohlala kulo nakubemi kunye nepesenti yakho yobunini benkampani, phakathi kwabanye abadlali. Ke, kufuneka isetyenziswe kuphela phantsi kwesikhokelo sengcebiso yerhafu yamava.
Ishishini elikwi-intanethi linokuba nesiseko somthengi wehlabathi. Umzekelo, ngaba ufuna ukuphindaphinda isiseko sakho somthengi ngamaxesha e-22? Inani labantu ngaphandle kwe-US limalunga namaxesha e-22 ngaphezulu kune ngaphakathi. Ubuninzi behlabathi ngaphandle kwe-UK lixesha le-109 likhulu kunangaphakathi, i-200 enkulu ngaphandle kweCanada kunye namaxesha e-304 ngaphandle kwe-Australia. Ufumana umbono. Kutheni le nto kufuneka uzibekele umda kwimodeli yakudala yefashoni eyakhelwe ngokwendawo? Ngenxa yoko, ukuseka inkampani engaselunxwemeni kunye neakhawunti yebhanki engaselunxwemeni yokuqhuba ishishini lakho kwi-intanethi kungayindlela elungileyo yokwakha ngaphandle kwelizwe ohlala kulo.
Kwimizuzu nje yokugcwalisa ityala, igqwetha linokufaka elinye uxwebhu ukukhulula iakhawunti yakho yebhanki, ikhaya lakho, ishishini lakho kunye nezinye izinto. Nangona kunjalo, ukusebenza kwishishini elunxwemeni kunika umqobo omkhulu kwisakhono se-viscous litigant sokukhulula kunye nokubamba izixhobo zakho zokusebenza kanzima.
Iziqwengana ezininzi zeNgeniso
Kuthekani ukuba inkampani yakho yendawo yakho ingena kumaxesha anzima? Khumbula i-US kunye neYurophu yase2008, 2009 kunye neminyaka elandelayo? Ngeli xesha uqoqosho lwe-Southeast Asia ne-Australia lwalusanda. Ngokufumana umatshini wemali kude nonxweme, unika umda ekuveleleni kuqoqosho lwasekhaya.
Kutheni unamashishini amaninzi e-Intanethi asehlabathini lonke asebenza ngaxeshanye?
Ixabiso eliphantsi lokumisela inani leenkampani ezingaselunxwemeni kunye neeakhawunti, kunye neenkonzo zokuphuhlisa iwebhusayithi eziphantsi kakhulu zenza ukutyalomali lokuqala njengehla nje kwibhakethi xa kuthelekiswa namandla anokubakho aphezulu. Umbutho wethu ubonelela zonke ezi nkonzo, kwaye unamashumi amawaka abathengi. Ukuba umlimi ufuna ukuvuna isivuno kufuneka atyale imbewu kuqala. Ayizizo zonke iimbewu ezikhula kodwa uninzi lwazo luyakhula; kwaye ezo zenzayo zinokumenza ukuba aphile kunye nosapho lwakhe ukuze aphile izizukulwana ezininzi.
Inkampani yaqala kwi1906. Siyazithanda iinkonzo zezezimali zangaphandle kunye nokhuseleko lweasethi kumatyala omthetho. Inkampani yethu inegalelo kwimithetho eNevis, Cook Islands naseDominica. Imigaqo yenkampani yethu ihlala incokola rhoqo kunye neentloko zelizwe ukuphembelela kwimithetho ngendlela elungiselela abathengi bethu.
Inkampani yase-Offshore inegalelo kwimithetho eNevis, kwiiCook Islands, eDominica naseCongo. Sidibana rhoqo neentloko zamazwe ukuphucula inkqubo yabo yolawulo.
Umphathi wethu kwi-Vance Amory, iNkulumbuso yeNevis (1992 - 2006 kunye 2013 - 2017)
Umphathi wethu kunye neRoosevelt Skerrit, iNkulumbuso yaseDominica
Umphathi wethu omkhulu noClément Mouamba, iNkulumbuso yeRiphabhlikhi yaseCongo (Brazzaville) kunye neGqwetha lethu uYonathan Amselem
Umphathi wethu kunye noMark Brantley, iNkulumbuso yeNevis (2017-Present)
Ndiza kugcwalisa iifom ze-intanethi kwaye amaphepha am aqulunqwa ngumcebisi ngeengxoxo zamahhala.
Ndifuna ukuthi ndiyachukumiseka ngokupheleleyo ngumgangatho wenkonzo. Ikhethekileyo !!! Sifumene amaxwebhu enkampani kunye ne-EIN kunye neleta yemvume evela kwiofisi yeRhuluneli ngale ntsasa. Ayinakonwaba ngakumbi. Ndiza kwazisa wonke umntu ukuba ungowuphi inkampani enkulu. Enkosi, uRon kunye noRoxy A.
-Ron kunye noRoxy A.
Ukusebenzisa izixhobo zoshishino lwe-offshore, ndakhusela imali yam ngeniso kunye neyeempahla ezivela kumgwebo onokubangela ukuba ungabikho.